Muxuu Klopp ka yiri kaddib markii Liverpool ay iska xaadirisay finalka UEFA Champions League? – Gool FM
Muxuu Klopp ka yiri kaddib markii Liverpool ay iska xaadirisay finalka UEFA Champions League?
Dajiye May 4, 2022
(Villarreal) 04 Maajo 2022. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka hadlay guushii ay xalay kooxdiisa Liverpool ka gaartay naadiga reer Spain ee Villarreal, taaso ka caawisay inay gaaraan finalka tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.
Liverpool oo jaratay tikitkeeda fianalka UEFA Champions League kaddib markii ay kaga soo adkaatay 2-3 kooxda Villarreal oo ay ku booqatay garoonka Estadio de la Cerámica, kulankii lugta labaad wareega afar dhammaadka ee tartankan, Reds ayaa cel-celis ahaan labada kulan ee wareegan kaga soo gudubtay 5-2.
Hadaba kaddib ciyaarta macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa wuxuu la hadlay warbaahinta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan ogaanay halka uu qaladka ka dhacay labada qeybood ee ciyaarta, wax walba way cad yihiin, waana degenayn.”
“Haddii Villarreal u ciyaari lahayd qeybta labaad si la mid ah qeybta hore, anagana waxaan sii wadi lahayn qaab ciyaareedka qeybtii hore, Villarreal-na waxay u soo bixi lahayd finalka.”
“inta lagu jiray qeybta nasashada waxaan moodnay in aan wali qeyb ka nahay tartanka, waxaana qasab nagu noqotay inaan isku dayno inaan soo laabano, taasina waa wixii aan sameynay.”
“Waxay aheyd ciyaar cajiib ah, waan ogeyn waxa na sugaya ciyaartaan oo kale, noloshuna mar walba waxay ku saabsan tahay falcelinta. marka ay arrimuhu si fiican u socon waayaan.”
Intaas kaddib Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa wuxuu sheegay inuu daawan doono kulanka caawa ee Manchester City iyo Real Madrid, wuxuuna yiri:
“Haa, waan daawan doonaa. Qof kasta oo guuleysta, finalka wuxuu noqon doonaa kulan aad u weyn, waxaana ku raaxeysan doonaa kulanka kama dambeysta ah ee ka dhici doono Paris.”
Horudhac: Real Madrid vs Manchester City… (Kooxdee ayaa caawa u gudbi doonta fiinaalka tartanka UEFA Champions League)
Macallinka naadiga Real Madrid ee Carlo Ancelotti oo taariikh cusub ka dhigi kara tartanka Champions League caawa